I-CNG Jumbo Cylinder Cascade-CNG yezoThutho kunye noGcino-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-SinoCleansky CNG jumbo cylinder Cascade iveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela elilinganayo lomntu wesithathu.
Iimveliso zisetyenziselwa indawo yokugcina indawo emileyo yokugcina i-CNG yesikhululo se-CNG, kwaye inokuyilwa ngokusekwe kwisicelo esineenkcukacha sabathengi. Icascade inokuba zizilinda ezibini, iisilinda ezintathu, iisilinda ezine, kunye nesilinda ezintlanu. Ukuba ngaphezulu kweesilinda ezintandathu, ngokubanzi, zinokuyilwa njengebhulukhwe yeskidi kunye nesakhelo sobungakanani besikhongozeli.
Uhlobo oluqhelekileyo lokuphamba kunye neSatifikethi se-ASME
Uxinzelelo lomsebenzi (MPa)
Umthamo wegesi (NM3)
Ukuzalisa ubunzima (kg)
Ubunzima besilinda (kg)
Ubunzima obukhulu (kg)
Umthamo wamanzi (M3)
Isisindo somzimba (kg)
17.4mm ubukhulu bodonga lwesilinda
14.8mm ubukhulu bodonga lwesilinda
I-CNG jumbo cylinder cascade inokuthunyelwa ngezikhongozeli eziqhelekileyo, izikhongozeli ezivulekileyo eziphezulu, okanye imithwalo eninzi esuselwe kubungakanani. I-CNG cylinder cascade iya kusiwa ngokhuseleko olukhethekileyo ukuba isikhongozeli.
Indawo yesilinda inengxelo yovavanyo yomntu wesithathu kunye nengxelo eneenkcukacha zomzi-mveliso. Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu ibandakanya uvavanyo kwisilinda nganye, kunye novavanyo lokuqina komoya. Ingxelo yomzi-mveliso iya kubandakanya isiQinisekiso soMgangatho, iNcwadi yokuFundisa, uvavanyo lweHydraulic, njl.
Sinoluhlu lwemveliso esele lukhona ukuze ulujonge kwaye ukhethe; Okanye ungasitshela indawo yakho efunekayo yokugcwalisa / uxinzelelo olusebenzayo / umthamo wamanzi, emva koko siya kuncoma imodeli efanelekileyo kuwe;
Kwisithuba seenyanga ezili-12 ukusukela kumhla wokuthunyelwa, phantsi kwesiseko sofakelo olufanelekileyo kunye nokusetyenziswa, sinikezela ngenkonzo yokulungisa simahla yokusilela kwemveliso. Ukuba ubungakanani beodolo yakho bukhulu, sinokuthumela injineli kwindawo yakho.